CPA – Win Bo Myint Accountancy Training Centre
CPA ( Certified Public Accountant ) ဆိုသည်မှာ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်အရ မြန်မာပြည်၏ အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြု ဖွင့်လှစ်ထားသော စာရင်းပညာသင်တန်းများထဲတွင် အမြင့်မားဆုံးသော ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
CPA ကို ဘယ်သူတွေတက်လို့ရနိုင်မှာမလဲ ?
ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံစားရင်းကောင်စီ MAC (Myanmar Accountancy Council) တွင်သာ CPAတက်လို့ရနိုင်သော်လည်း CPA 43 Batch မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ အသိအမှတ်ပြု Private ကျောင်းများတွင် သင်ယူခွင့် ရရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါမှာတော့ B.Com,B.Act,B.B.A,DA,ACCA Part(II) ဆိုရင် ဝင်ခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီး အခြားဘွဲ့ရဆိုရင်တော့
2.Cost and Management Accounting
3.Auditing ဘာသာရပ်(3) ဘာသာကို အချိန်(2)နာရီအတွင်း Multiple Choice Question ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။CPA သင်တန်းကို (2)နှစ် တက်ရောက်ရပါမည်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ တက်ရမှာလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းရုံးသင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ခွင့်ရသူတွေက နေ့စဉ် (Monday to Friday) မနက်(7;00-9;00),Saturday(7;00-12;00) ထိ တစ်ပတ်(6)ရက်တက်ရပါတယ်။ကျောင်းခေါ်ချိန် 75% မပြည့်ရင် စာမေးပွဲဖြေခွင့် ဆုံးရှုံးပါတယ်။အပြင် Private ကျောင်းတွေဆိုရင်တော့ မိမိအဆင်ပြေတဲ့ အချိန်နဲ့ ရွေးချယ်တက်လို့ရပါတယ်။
CPA Part-I မှာ ဘာတွေသင်ရမလဲ ?
Professional Financial Accounting and External Reporting I
Practical Auditing I
Business Environment and Management
Financial and Service Regulations
CPA Part-II မှာ ဘာတွေသင်ရမလဲ ?
Advanced Accounting and Financial Reporting II
Practical Auditing II
Financial Knowledge and Current Economic Affairs
Business Analysis and Strategic Information System
အပိုင်း(1)ပိုင်းကို တစ်ကြိမ်စာမေးပွဲဖြေရပါတယ်။ အပိုင်း(2)ပိုင်းလုံးအောင်မှ CPA(အောင်)ဆိုတဲ့ လက်မှတ်ရပါတယ်။ CPA ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပါက Association of Chartered Certified Accountant (ACCA) ပညာရပ်ကို ဆက်လက်လေ့လာမည်ဆိုပါက ACCA (5) ဘာသာကို ကင်းလွက်ခွင့်ရရှိမည်ပါသည်။ထို့အပြင် CIMA ပညာရပ်များကိုလည်း ဆက်လက်လေ့လာမည်ဆိုပါက (16) ဘာသာရှိသည့်အနက်မှ နောက်ဆုံး(4) ဘာသာကိုသာ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဘာသာအားလုံးကို ကင်းလွက်ခွင့် ထပ်မံရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်သင်ကာလ(3)နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအလုပ်သင်လစာရရှိပါမည်။CPAကျောင်းတက်ရင်းတစ်ပြိုက်နက်တည်း အလုပ်သင်ဆင်းရသလို ကျောင်း(၂) နှစ်တက်ပြီး ဆင်းလည်းရပါသည်။တစ်ပြိုင်တည်းဆင်းရင် ကျောင်း(2)နှစ်(ဆက်တိုက်အောင်ရင်) အလုပ်သင်လုပ်သက်လည်း (2)နှစ် ရနေပြီး နောက်ထပ် (1) နှစ်ပဲ အလုပ်သင်ဆက်ဆင်းရပါတော့မည်။ကျောင်း(2)နှစ်ပြီးမှ ဆင်းရင်တော့ ဆက်တိုက်အောင်ရင်တော့ (5)နှစ်မှ CPA (ပြည့်မီ)ဆိုတာဖြစ်မှ လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော Accounting Professional ပညာရပ်များထက် သင်တန်းကြေးနှင့်စာမေးပွဲကြေးများ အလွန်သက်သာပါသည်၊CPA Part(I) သင်တန်းကြေးမှာ 1နှစ်စာလုံးအတွက် ပေါင်းကြည့်မည်ဆိုပါက ks-600,000 ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်။CPA Part(II) သင်တန်းကြေး 1နှစ်စာလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ Ks-800,000 ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်။
CPA Facebook Link